ရေဘဲလေး အထုပ္ပတိ(အပိုင်းသုံး) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » ရေဘဲလေး အထုပ္ပတိ(အပိုင်းသုံး)
Posted by DEPARKO DEPARKO on Sep 15, 2012 in Contributors, Copy/Paste |7comments
ကျိုက်လတ်မြို့ တစ်ဖက်ကမ်း ကင်းချောင်းဆိုတဲ့ရွာလေး အဖေ့ဘက်က အမျိုးတွေရော အမေ့ဘက်က အမျိုးတွေရော များသောအားဖြင့် ကျွန်တော့် ညီအကိုတစ်ဝမ်းကွဲ ကိုသန်းထွန်းအိမ်မှာ ကိုသန်းထွန်းက အုန်းသီးကုန်သည် ကင်းချောင်းတစ်ဝိုက်နဲ့ ကျိုက်လတ်ပါတ်ဝန်းကျင် ရွာလေးတွေမှာ အုန်းသီးလိုက်ကောက်တယ် ပြီးတော့သူ့လှေနဲ့သယ်လာပြီး သုံခွဆုံဒေါင့်က သူ့အိမ်မှာ အုန်းသီးအခွံနွှာတယ်
မြေကြီးမှာ ပြောင်းပြန်စိုက်ထားတဲ့ လှံလိုမျိုးသံချွန်မှာ ခွမ်းကနဲ ခွမ်းကနဲ ထိုးခွါတာ နာရီဝက်အတွင်း အုန်းသီးတစ်ရာနှစ်ရာပြိုက်ကနဲဘဲ တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ် အုန်းသီးအခွံကို အုန်းဆံကြိုးကျစ်တယ် တစ်နေ့တစ်နေ့ အုန်းသီးကောက်တာလိုက် အုန်းဆံကြိုးကျစ်တာဝိုင်းလုပ်
ခြံထဲသွား ငှက်ပျောသီးခူးနဲ့ တောပျော်ဖြစ်နေတယ် ဒေါ်ချောနဲ့သူ့ယောက်ကျား ကျွန်တော့်ကို အတော်သံယောဇဉ်ဖြစ်နေကြပြီ
ညနေဆို ကလေးတစ်သိုက်နဲ့ မြို့ကြီးသားကျွန်တော် အတွေ့အကြုံရှင်လင်းပွဲ ညနက်တဲ့အထိပါဘဲ တောသဘာဝ မီးမရှိ တီဗွီမရှိ ဆူညံသံမရှိ အပူမရှိ အမေနဲ့ကျွန်တော် တော်တော်ပျော်ခဲ့ရတယ်
လသာသာ ညမှောင်မှောင် ငယ်မူပြန်နေကြတာ အခုထိမြင်ယောင်နေသေးတယ်
အမေ့ရဲ့ရွှမ်းလဲ့တောက်ပနေတဲ့မျက်ဝန်းဟာ အတိတ်ကို ပြန်သတိယ အောင်းမေ့တမ်းတ လွမ်းဆွတ်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ အချိန်လေးကို ကျွန်တော် အခုထိမှတ်မိနေသေးတယ် အမေ
ကျွန်တော် ကျိုက်လတ်မှာ ဆက်နေချင်ပေမဲ့အမေ့ရဲ့ရီဝေနေတဲ့
စိန်ဂျွန်းကျောင်းသားရဲ့ သင်္ကေတ လွယ်အိပ်ကိုထုံးပြီး တိုတိုစလွယ်သိုင်းလွယ်
ဂျစ်ကန်ကန်၊ ကားပေါ်ကသူတွေကို တစ်ချိန်လုံးအကဲခါတ်
လမ်းစဉ်လူငယ် ခေတ်ပေါ်တီးဝိုင်းမှာ ရစ်သမ်ဂစ်တာသမား၊
ရပ်ကွက်ထဲက CRYSTAL တေးဂီတတီးဝိုင်းမှာ
လိဒ်ကိုပါ ဘေ့စ်စိုးတင့် ဒရမ်စန်းဝင်း စကင်းလိဒ်စိုးဝင်း ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့
ကိုစန်းဝင်းရဲ့ ဒရမ်လက်စွမ်းပြမှုက ဒရမ်ကို ရိုးအရိုက်ကောင်းတာ
အသွားမှာ ရှဲကိုရိုက်တာမထိတော့ လက်ပြန်လှန်ပြီးရိုက်လိုက်တာ
ရှဲအပေါ်က ချုပ်ထားတဲ့မူလီ ပြုတ်ထွက်ပြီး ရကွင်းပြားရှေ့ကို လွင့်ထွက်သွားတာ ရည်ရည်အောင်ရဲ့ ခါးတည့်တည့် ၊ဘေ့စ်တီးတဲ့ကိုစိုးတင့်
ရည်ရည်အောင်ရဲ့ခါးကိုဆွဲပြီးရှောင် စတိတ်ရှေ့ကို ပန်းကန်ပြားပျံလို အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကျအသွား ရှေ့ဆုံးတန်းခုံက ပရိတ်သတ်တွေ ထပြေးကြတာ ပွဲပျက်မတတ်ဘဲ
အကျိုးဆက်က ၀န်ထမ်းလစာ၂၀၀ခေတ် ၅၀၀၀ လျော်လိုက်ရတယ်
သူ့အိမ်က ကျွန်တော်အိမ်ကဆင်းလာရင် ခိုလှုံရာနေရာ
သူ့မိန်းမကလဲ ကျွန်တော့်အတွက် အမြဲတံခါးဖွင့်ထားတယ်
သူပေးတဲ့ ကျွန်တော့်နာမည်ပြောင်က သပွတ်တဲ့
ကျွန်တော့်ကိုခေါ်ရင် သပွတ် လို့ဘဲခေါ်တာ
အိမ်ထောင်ရေးရော စီးပွါးရေးရော ပျက်သွားတာ
အခုတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ပွါးသမီးလေးတစ်ယောက်
စားအိမ် အိပ်ဘို့ အိမ်ကနှင်ချရင်ခိုလှုံရာ
အလုပ်က သူက သမဆိုင်တာဝန်ခံ၊
ဒီတော့ ကျွန်တော်က ဆိုင်အကူအလုပ်သမား
အဲဒီမှာ ပထမဆုံး ရည်းစားရခဲ့တယ်
ရည်းစားစကားလဲပြောရော တစ်ခါတည်း အိတ်ထဲက ဒါးဆွဲထုတ်ပြီး
ကျွန်တော့်ဘေးက ဆန်အိတ်မှာ စွပ်ကနဲစိုက်နေတာ
ဒါးကိုဆွဲနှုတ်ပြီး ချက်ချင်း ပြန်ပစ်လိုက်တာ
ဒါးကို မနဲပြန်နှုတ်ယူရတယ်( ကရင်ခြံထဲမှာအားအားရှိ
ယားယိစ် ဘာမှန်းမသိတဲ့ သိုင်းတွေလေ့ကျင့်၊အုန်းပင်တွေကို
ကျိုက်ကဆံကွင်း ပြည်ထောင်စုနေ့ပြခန်း (၁၀ရက်ကျင်းပ ဓါတ်ပုံလိုင်စင်ခ၁၅၀၀ကျပ်၊ ၀န်ထမ်းလစာ၁၃၅ကျပ်ခေတ်)
ဓါတ်ပုံများမှာ လူပုံသာပေါ်ပြီး၊ ပြခန်းများ(မီးလုံးရောင်စုံများပုံမပေါ်)
(ထိုခေတ်ကနေ့ချင်းပြီး၊ ဓါတ်ပုံဆိုင်များမှ ကွင်းထဲအထိ လာယူကူး)
သင်ပေးလို့ (အသက်ငယ်ငယ်ရုပ်ချောချော ကောင်လေးတစ်ယောက် ဒုက္ခရောက်နေတာ မကြည့်ရက်လို့နေမှာပေါ့)
ကျွန်တော့် ဓါတ်ပုံတွေအဆင့်မမှီပေမဲ့ အားပေးကြတော့
ဘေးက နာမည်ကြီးဓါတ်ပုံဆရာတွေတောင် မနာလိုဖြစ်ကြတယ်(အဟုတ်)
ဂျစ်တူး၊ တူးမာ အမွှာညီအစ်မနှစ်ယောက် ကျွန်တော်ရဲ့ပင်တိုင်မော်ဒယ်
သူတို့နှစ်ယောက်က ကျိုက်ကဆံ ရဲဝန်းထဲမှာနေတယ် သူတို့နှစ်ယောက်က
ပွဲအစကနေအဆုံး သူတို့နှစ်ယောက် ကျွန်တော်ဆိုင်မှာအခမဲ့လုပ်အားပေးကြတော့ မိန်းကလေးပရိတ်သတ်တင်မကတော့ဘူး
ယောက်ကျားလေး တော်တော်များများ ကျွန်တော့်ဆီမှာဓါတ်ပုံရိုက်
သာယာဝတီမြို့၊ အင်းရွာ၊ ဂရန်သာယာအေးရွာ၊
သုံဆယ်မြို့၊ ဖိုးခေါင်ရွာ၊ အိပ်လှရွာ၊ သာယာဝတီ၊ သုံးဆယ်တစ်ခွင်ပြဲပြဲစင်အောင်
အလှူ၊မင်္ဂလာပွဲ၊ ဘေထုတ်ထည်တွေရောင်း၊ ဓါတ်ပုံလဲရိုက်၊
ဂရန်သာယာအေးရွာ ကာလသားခေါင်းလိပ်မ ကျွန်တော့်ကို
မိန်းမပေးစားဘို့ကျိုးစားတာ အိပ်တွေဖွက်ထား သူသဘောတူတဲ့အပျိုအိမ်မှာ ညအိပ်ခိုင်းတာ ကံကောင်းလို့အိုတော့မလို့။
အမ(၄)ဆယ်တန်းတစ်နှစ်ကျ အမ(၅) ကျွန်တော်နဲ့
ကျူရှင်ကအထုတ်ခံလိုက်ရတယ် (အမ ၄ အမေ့ကိုအတို့အထောင်
မိုးနွယ်သန့်၊ အမတွေနဲ့ တစောင်းချေးနဲ့မျက်ချေး ကောင်မလေးကလှတယ် ခေတ်ဆန်တယ်
အဲဒီမှာတင် အမတွေအုပ်စုထဲက တင်အုန်းမော်ဆိုတဲ့
ချစ်ရေးဆို၊ ဘယ်သူမှမရဟု နာမည်ကြီးမာနခဲ)
အမ(၄)က နင့်လိုကောင်ကို တင်အုန်းမော်က ဖိနပ်တောင်မကိုင်ခိုင်းဘူးဆိုပြီး
(တော်သေးတာပေါ့၊ တရားမစွဲခဲ့လို့၊ အခုတော့အဲဒီလိုမျိုး
လုပ်ရင်း အမေ့ရဲ့ဒေါသက ကျူရှင်ကနေထုတ် ကောင်မလေးနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်ကရော၊ (ရည်းစားလဲဖြစ်ရော၊
ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ အမ(၄)နဲ့မဲ့ကာရွဲ့ကာ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ
ပညာတတ်မှာ သိပ်ကြောက်ပုံရတယ်၊ မှားရင်ခွင့်လွှတ်ပါ၊ မြေးတွေလဲကြရော ပညာရေးကိုအားပေးလိုက်ရတာ မယုံနိုင်လောက်စရာပါဘဲ)
ဒီမှာတင် ကျွန်တော်တို့ဇါတ်လိုက် အိမ်ပြေး
ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖားအံမြို့လှိုင်းဘွဲ့ အနီးမဲဘောင်ကျေးရွာ
သူငယ်ချင်း ကရင်လူမျိုးနဲ့ပေါင်းပြီး တောထဲရောက်သွားပါလေရော၊
အဲဒီမှာ ကလေးမလေးနှစ်ယောက်၊ ရှစ်နှစ်၊ ဆယ်နှစ်
ကရင်စာ၊ စကား။	ရှမ်းစကား(ထိုင်း)သင်ပေးရင်း
သံယောဇဉ်ဖြစ်၊ ကျွန်တော်သွားလေရာ တစ်ကောက်ကောက်
ခွေကဘောင်လို့ခေါ်တဲ့ဇွဲကပင်ဟာလဲ ကျွန်တော့်ခြေဖ၀ါးအောက် အခေါက်ခေါက်
ရန်ကုန်ကို တောလမ်းကနေ ခြေလျှင်တစ်သွယ်လှေတစ်တန်
အသက်ဘေးက ခတ်သီသီ မကြာခဏဆိုတော့ ကြောက်လာပြီ
(ပစ္စည်းတွေပါတော့ အဖွဲ့စုံက ကျွန်တော်တို့ကို
တရားမ၀င်ဆိုတော့ လမ်းမှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ အနိဋာရုံမြင်ကွင်းတွေက
ဘာသာအားလုံး အင်္ဂလိပ်လို မြန်မာကလွဲလို.
အိမ်နားက ငှက်ပျောသီးရောင်းတဲ့ ကောင်မလေးကို
ကျွန်တော် ဖတ်စာအုပ်အားလုံးကို တစ်ရွက်မကျန်ဖတ်လိုက်ပြီး
ညဖက်ကို မလိုတစ်မာ အတင်းစကားတွေကြား
အင်္ဂလိပ်၊ အီကို၊ သမိုင်း သင်ချာ၊ ပထ၀ီအားလုံး အင်္ဂလိပ်လိုဖြေရလို့လာမသိ ၇၅မှတ်နားမှာချည်းဘဲ
ဖတ်စာအုတ်ထဲကအတိုင်း သည်၏မလွဲ ဖြေထားတဲ့အပြင်
သီးစစ်ရေးလိုက်တာ ၁၀ မျက်နှာကျော်တယ်
(အချိန်တွေကပို ဖြေပြီးလဲ မထွက်ရတဲ့ခေတ်ဆိုတော့)
စနစ်သစ်ကလဲ စကာစနှစ် ဆိုတော့
တစ်ခါတည်း မော်ဒရေးရှင်း အမှတ်ပေးလိုက်တာ
ချလိုက်ရင် အခုထိ၁၀တန်းအောင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး
တရားတရားနဲ့ သမီးမွေးပြီးစားတဲ့ တရားသမားကို ကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတယ်
လူပုံကယောင်ကြီးဘွေ လူတော်တော်များများက သူတော်ကောင်း လူကြီးလူကောင်းလို ဆက်ဆံကြပေမဲ့
ညမှောင်မှောင် မီးရောင်မှိန်မှိန်မှာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ (ကောင်မလေးမှ ဖေကြီးဟု ခေါ်သူ) နဲ့အချစ်ဇတ်ကြမ်းကားရိုက်နေတာကို အိပ်မမပျော်တဲ့လူပျိုပေါက် ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတော့
နောက်နေ့ကစပြီး အဲဒီသက်ကြားအိုကြီးကိုရွံ တရားသမားတွေကို တော်တော်ကြောက်ခဲ့ရတယ်
တရားစခန်းလဲပြီးရော ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် တရားတွေအများကြီး ပေါက်မြောက်သွားသလို အပြောတွေကြီး
အခြေအနေအရ ကျိုက္ကဆံရဲဝန်းကနေ လှိုင်ရဲစခန်းကို ပြောင်းရတယ်
ရဲစခန်းထဲမှာ လက်တိုလက်တောင်း၊ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ရဲသားပေါက်စနလေးပေါ့ ၄လလောက်ကြာတော့
ပြသနာကစပြီ စခန်းမှာ ၅လလောက်ဘဲကြာတယ်
ပါတီဌာနချုပ်ကို အတင်းပြောင်း ၀န်ထမ်းအဖြစ်စာရင်းသွင်း
ရဲကနေထွက်စာတင် (၀န်ထမ်းပြောင်း၊ ရဲသင်တန်းမတက်ရသေး၊ တပ်သားအတည်မပြုရသေး)
ပစ္စည်းထိန်းတွဲဘက်ရာထူး၊ အသစ်စက်စက်နဲ့ကျွန်တော်ရုံးချုပ်ကို ဖယ်ရီပေါ်ငြိမ့်ငြိမ့်လေးစီး
(အလုပ်ပြုတ်၊ ပါတီပျက်တော့မှာ ကြိုမှမသိခဲ့တာကိုး)
အဲဒီအချိန်အမ (၂)နဲ့(၄) ကပါတီဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေပြီ
လစာကလဲ ကျွန်တော်တို့လို လူပျိုလူလွတ်အတွက်က လောက်တဲ့အပြင်
ပိုတောင်နေသေး လစာထုတ်တဲကနေ့က အိမ်သားတွေရဲ့အရေးပေးခံရတဲ့နေ့
ရုံးတက်ပြန်တော့ အရေးအခင်း လူအုပ်ကြားထဲ
(၇မိုင်မှ နံနက် ရုံးကို ကားစီး၊ ရုံးရောက်တော့ပါတ်ပါတ်လည်လူသိန်းနဲ့ချီ၊
အတားအဆီး၊ အစစ်အဆေး(ဘာကောင်မှန်းမသိတဲ့လက်ပါတ်ဝတ်ရဲရဲနီ၊ သူတို့မထင်ရင်မထင်သလို သေဒါဏ်ပေး
ဘုရားလမ်းအတိုင်းတက် အိမ်ကို အသက်ဖက်နဲ့ထုတ်ပြီး
အရေးအခင်းလဲပြီး ပါတီလဲပျက် ဟော ပါတီက၀န်ထမ်းတွေ
၀န်ထမ်းတော်တော်များများ ငိုပွဲဆင်တဲ့နေ့ (လုပ်သက်ရင့်၁၅/၂၀)
အသက်အရ တစ်ခြားဘာလုပ်ရမှန်းမသိတဲ့ ၀န်ထမ်းအိုကြီးများ
လက်ထဲမှာ ၀န်ထမ်းကဒ်ဟောင်း ထောက်ခံစာအပြည့်
တပ်သားသစ်အတည်ပြု – ၁၉၈၉
ဆိပ်ကြီးမှာ အခြေခံသင်တန်းတက်ရင်း နဂိုကထဲက ရောက်လေရာအရပ် စီးပွါးရှာတတ်တဲ့ စီးပွါးရေးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားလေးကျွန်တော်
ဓါတ်ပုံရိုက် ဗေဒင်ဟော အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ ရဲဘော်သစ်ကလေးတွေကြား
ကျွန်တော်ဟာ သူတို့အတွက် တကယ့်ကိုအားကိုးစရာတစ်ယောက်ပေါ့
တစ်ချို့ကတော့ ကျွန်တော့်ကို မနာလိုကြဘူး
နည်းပြတွေနဲ့ လက်ပွန်းတနှီး ဖြစ်နေတော့(၀န်ထမ်းနှစ်ဆက်ကနေ သုံးဆက်မြောက်ဆိုတော့လဲ သုံးကျောင်းပြောင်းသောရဟန်း၊ သုံးလင်ပြောင်းသောမိန်းမ၊ ဘယ်တုံးကကောင်းဘူးလို့လဲ)
အခြေခံသင်တန်းမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်းလဲ မလုပ်ရဘူး
သူများတွေလုပ်တာ ထိုင်ကြည့်ယူနီဖေါင်းနဲ့ဟန်ရေးပြနေတဲ့သူငယ်ချင်းတွေဆီက ပိုက်ဆံကိုကဲ့ယူ ဓါတ်ပုံရိုက် ဆရာတွေနဲ့ ပေါင်း မုန့်မျိုးစုံရောင်း
ဆရာတွေရဲ့ဆိုင်မှာ ကူလုပ် ထမင်းကြော် လက်ဘက်ရည်ဘိုး ပူစရာမလို
ဆက်ပါဦး ကိုယ်တိုင်ရေး အတ်ထုပ်ပတ်တိ လေး
အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ဖတ်မိတဲ့ငယ်သူငယ်ချင်းတွေအဆက်အသွယ် အမှတ်တရဖြစ်စေဘို့ အမည်မှန်တွေသုံးခဲ့ရတာကို ခွင့်လွှတ်ကြပါရန် ရေတပ်ထဲမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်များ ဆက်လက်ဖေါ်ပြပါမည် ရေးပြီးသားပို့စ် တွေထဲမှာ လက်ရှိအတွေ့အကြုံများဖေါ်ပြပြီးဖြစ်ပါသည်
ကောင်းဗျာ …ချို ချဉ် ငံ စပ် အရသာစုံတဲ့ အသုပ်တစ်ပွဲ စားလိုက်ရသလိုပဲ…….
အပိုအနေနဲ့ ဟင်းရည်ပူပူလေးကလဲ ပါသေးဆိုတော့ …ဘာပြောကောင်းမလဲဗျာ..
ဆက်လုပ် ရဲဘော် . ဆက်လုပ် .
ဒီပါကိုရဲ့ အရေးအသားက ဇာတ်ကောင်စရိုက်ကို ပေါ်လွင်စေတယ်။
အသိထဲမှာလည်း အဲလိုစရိုက်မျိုးတွေ ရှိတယ်။
မိဘမောင်နှမနဲ့ အဆင်မပြေပေမယ့် တွေ့တဲ့လူနဲ့ တည့်အောင်ပေါင်း၊
သူ့ကို သိတဲ့လူတွေအားလုံး ခင်မင်တွယ်တာနေတတ်ကြတာမျိုး။
အင်းးးးးးး ခုကြော်ညာစကားနဲ့ ပြောရရင်တော့…
မမရေ အခုအသက်တွေကြီးလာတော့လည်း ပြောင်းလဲကုန်တာပေါ့ အမ ၅ ယောက်မှာ တစ်ယောက်ဘဲအိမ်ထောင်ကျတယ် အကြီးဆုံးက အင်္ဂလန်ရောက်နေတာ အသက်၆၀ ပြည့်တော့မယ် အကုန်လုံး လူပျိုကြီး အပျိုကြီးတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီ အခုတစ်ခါတစ်ခါ နောင်တရတယ် သူတို့သာ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရင်ကျွန်တော်တော်တော် သက်သာမှာ အခုတော့ အပျိုကြီးတွေကြားမှာ အမလေး